N26, eo amin'ny findainao ny bankinao | Vaovao IPhone
N26, eo amin'ny findainao ny bankinao
Ny tontolon'ny banky dia miova, ary haingana be. Raha toa ny fandoavam-bola amin'ny finday dia mbola ao anatin'ny dingana mandroso tokoa eto amin'ny firenentsika, miaraka amin'ny fahatongavan'i Apple Pay herinandro vitsivitsy lasa izay avy any Banco Santander, dia misy hevitra vaovao momba ny banky izay mihoatra lavitra noho ny fantatsika hoe "banky an-tserasera". N26, fikambanana alemanina, tonga eto amin'ny firenentsika miaraka amina endrika miavaka: amin'ny findainao ihany io. Afaka manokatra kaonty ianao ao anatin'ny 5 minitra fotsiny, nefa tsy mila mandefa antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny mailaka, ary izany rehetra izany dia avy amin'ny fampiharana ho an'ny iPhone.
Ny N26 dia tohanan'ny fiantohana alemanina, ary omena alàlana hiasa ho toy ny andrim-bola, izany hoe tsy mila miahiahy satria toy ny banky hafa fa manana toetra manokana mampiavaka azy. Mazava ho azy fa tsy misy sarany fikojakojana, manana karatra debit MarterCard aza maimaim-poana ianao, izay azonao ampiasaina amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao tsy misy kaomisiona amin'ny fandoavana vola vahiny. Azonao atao mihitsy aza ny misintona ny MasterCard ATM tsy misy kaomisiona hatramin'ny in-5, aorian'izay dia efa mila mandoa € 2 isaky ny fifanakalozana amin'ny ATM ianao.
N26 - Ny Banky findaymaimaim-poana
Ny famindrana amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaona na mailaka tsy misy kaomisiona, na dia amin'ny vola vahiny aza, dia azo atao ny mampihetsika na mamono ny karatrao amin'ny findainao, na mampandeha ny asa any ivelany, manosika ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena fiasa ataonao amin'ny kaontinao, ovao ny fetran'ny karatra ho an'ny asa amin'ny findainao ... Izay rehetra ilainao amin'ny banky dia eo an-tanan'ny rantsan-tànanao amin'ny fikasihana tsotra amin'ny efijery findainao, mazava ho azy arovana miaraka amin'ny teny miafina sy amin'ny TouchID-nao. Mazava ho azy fa manana fampiharana ho an'ny Apple Watch koa izy. Fomba hafa hiterahana banky izay azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny finday avo lenta. Etsy andaniny, talohan'ny nandaingako rehefa nilaza aho fa amin'ny findainao ihany io dia manana izany ihany koa ianao https://my.number26.de
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » N26, eo amin'ny findainao ny bankinao
Ity dia efa natolotry ny orinasa espaniola. ImaginBank no iantsoana azy. Tsy misy "mahagaga" amin'izany.
Miankina amin'ny La Caixa izany. N26 dia tsy avy amin'ny orinasa hafa
Eny, miankina amin'ny La Caixa. Izay tsy midika hoe efa nisy zavatra toy izany tany Espana. Ka "tonga ny foto-kevitra vaovao momba ny banky", ary izany dia zavatra "tokana" tsy dia tena marina ...
Izy io dia manana toetra mampitovy an'ny ImaginBank avy amin'izay hitako, tsy misy saram-pikojakojana na misy karatra, afaka misintona vola, na dia tsy misy fetra ao amin'ny ImaginBank ao amin'ny ATM an'ny vondrona aza. Miaraka amin'ny fampandrenesana fanosehana, famindrana kaonty na finday, fanaraha-maso ny karatra amin'ny fampiharana ...
Arakaraka ny namakiako azy no vao mainka toa ny zavatra efa nataon'i ImaginBank.
Mazava ho azy fa manao izay azon'ny banky atao rehetra. Ny zava-baovao dia banky "virtoaly" 100% izy io, tsy miankina amin'ny banky "normal" rehetra, na manana birao na zavatra hafa toa izany. Ny banky an-tserasera dia efa niasa efa ela, iBanesto dia efa tany taona maro lasa izay. Fa ny tany am-boalohany, ny mampiavaka azy dia ny 100% toa izany, tsy sampana hafa izy io, raha tsy fantatsika.
Fa avia, raha ny tianao holazaina dia hoe manao izay ataon'ny hafa izy, mazava ho azy. Afa-tsy ny hetsika vahiny… izay tsy isalasalako fa maro no manao izany.
Imaginbank mamela anao hisintaka tsy misy kaomisiona amin'ny faritra euro euro? Tsy fantany…
Efa nanana N26 aho talohan'ny nantsoina hoe Number26, afaka manala vola ianao raha tsy misy kaomisiona any amin'ny faritra euro euro, avy eo any amin'ny firenena hafa tsy euro dia mitondra komisiona izany raha tsy mifidy ny Black mode izay misy fiantohana amin'ny dia.
Tena mandeha tsara izy io. Mba hanokafana ny kaonty dia mangataka ny pasipaoronao izy ireo ary hanamarina izany amin'ny alalàn'ny App azy ireo.
Doka vaovao telo mampiseho ny AirPods: fampiroboroboana betsaka ary tahiry kely
Ny Appstore dia mitombo 60% mandritra ny taona lasa 2016